Petition · မြန်မာပြည်မှာ ဆင်ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရောင်းဝယ်နေတာတွေကို တားဆီးကြပါစို့ · Change.org
VOICES FOR MOMOS started this petition to နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် and
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ပတ်လျှင် တောဆင်ရိုင်း တစ်ကောင်နှုန်း သတ်ဖြတ်ခံနေရပါတယ်။
ဆင်ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဈေးကွက်တွေမှာ ရောင်းဝယ်နေကြပါတယ်။
မဝယ်ပါနဲ့! မသုံးပါနဲ့! မရောင်းပါနဲ့!
ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့ ဟာ မိုမိုတို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက် ဆင်ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေ ရောင်းဝယ်နေတဲ့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး က ဈေးကွက်တွေ ပိတ်သိမ်းရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ ကတိပြု လက်မှတ်ရေးထိုးပါတယ်။
At least one wild elephant is killed every week in Myanmar.
Elephant products are sold in our markets.
Don't buy! Don't use! Don't sell!
We, the undersigned, pledge to keep our momos safe by ending the sale of elephant products nationwide.